Heshiiskii Luis Suarez Iyo Juventus Oo Burburay Iyo Sababta Rasmiga Ah Ee Ka Danbeysa Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Heshiiskii Luis Suarez Iyo Juventus Oo Burburay Iyo Sababta Rasmiga Ah Ee Ka Danbeysa Oo La Ogaaday
Heshiiskii uu weeraryahanka Barcelona Luis Suarez ugu wareegayay kooxda Talyaaniga ee Juventus xagaagan ayaa burburay sida ay sheegtay Idaacada Catalan ee RAC1.
Waxaa la sheeegay in imtixaankii dhalashada Talyaaniga ee uu geli lahaa weeraryahanka inaan natiijadiisa la soo saari doonin ilaa iyo 6da October sidaasi darteedna ay keeneyso in ciyaaryahanka aan lagu soo dari karin liiska ciyaartoyda Juventus ee ka qeyb qaadanaya wareega group-yada Champions League.
Idaacada Catalan ka soo baxda ayaase sheegtay in xiddiga reer Uruguay uu weli doonayo inuu ka tago Camp Nou isagoo heysta dalabyo kale oo ka baxsan midka Juvebtus.
Dhawaan warbaahinta Spain ayaa sheegeysay in Suarez uu doorbidayo inuu baaqi ku sii ahaado horyaalka La Liga iyadoo ay u badan tahay inuu u wareego Atletico Madrid bedelkii uu u dhaqaaqi lahaa Talyaaniga.
Inkasyoo uu dhaliyay 21 gool xillo ciyaareed ay dhaawacyo wareeriyeen hadana qaab ciyaareedka Suarez ayaa hoos u dhacay xilli ciyaareedyadii ugu danbeysay taasoo keentay shaki la geliuo mustaqbalkiisa Barcelona.
Barcelona ayaa u aragta weeraryahanka Inter Milan Lautaro Martinez bedelka mudada dheer ee Luis Suarez halka ay sidoo kale qarka u saaran yihiin dhameystirka saxiixa Memphis Depay.
Suarez ayaa dhaliyay 197 gool 283 kulan uu u saftay Barcelona tan iyo markii uu kaga soo biiray Liverpool xagaagii la soo dhaafay.